Abavelisi abakhethiweyo abaninzi kunye nababoneleli - China iMveliso yokuKhetha ngakumbi
Iimveliso zethu zamkelwe ngokubanzi kwaye zithembekile ngabasebenzisi kwaye zinokuhlangabezana ngokuqhubekayo nokuphuhlisa iimfuno zoqoqosho nezentlalo zoKukhetha okungakumbi,,,, Umgangatho yindlela yokuphila yefektri, Ukugxila kwiimfuno zabathengi kunokuba sisiseko sokusinda kwenkampani kunye nenkqubela phambili, Sihambelana nokunyaniseka kwaye Isimo sokusebenza sokholo olukhulu, sijonge phambili ekuzeni kwakho! Ngoku sineqela lethu lokuthengisa, isimbo kunye nabasebenzi bokuyila, abasebenzi bezobuchwephesha, abasebenzi beQC kunye neqela lephakheji. Ngoku sinemigaqo engqongqo yokulawula iinkqubo kwinkqubo nganye. Kananjalo, bonke abasebenzi bethu banamava kushishino lokuprinta kuKhetho oluNinzi, iinjineli zeR & D ezifanelekileyo ziya kubakho kwinkonzo yakho yokubonisana kwaye siya kuzama konke okusemandleni ethu ukuhlangabezana neemfuno zakho. Ke nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi xa unemibuzo. Uyakwazi ukusithumela ii-imeyile okanye usitsalele umnxeba ngeshishini elincinci. Kananjalo uyakwazi ukuza kwishishini lethu ngokwakho ukuze uqhubeke usazi. Kwaye ngokuqinisekileyo siya kukunika eyona kowuteshini kunye nenkonzo yasemva kwentengiso. Sikulungele ukwakha ubudlelwane obuzinzileyo nobobuhlobo nabarhwebi bethu. Ukuphumeza impumelelo yethu sobabini, siya kwenza konke okusemandleni ethu ukwakha intsebenziswano kunye nomsebenzi wokunxibelelana ocacileyo namaqabane ethu. Ngaphezulu kwako konke, silapha ukwamkela imibuzo yakho ngayo nayiphi na impahla kunye nenkonzo yethu.
Uhlobo lweNcwadi yeNdlu yeNdlu AT2001
Uhlobo lwencwadi yenja yeNdlu i-AT2001 isebenzisa uyilo olunokuphinda lusongeke, inokutyhilwa ngokukhawuleza ukuba yenze indlu yoyilo lwenja. Ayilungelanga kuphela ukugcinwa ekhaya kodwa ikwalungele ukwenziwa. Uyilo oluhle kakhulu, lunokusasazwa kwimizuzwana emithathu ukwenza indawo yabucala yezilwanyana zasekhaya. Phakamisa isiseko ukukhusela izilwanyana ekunxibelelaneni nokufuma emhlabeni, ubungqina bokufuma kunye nobungqina bokufuma. Emva kokuba isongelwe, ikwimo yencwadi, enesiphatho esiphathwayo, ekulula ukuyihambisa.
Ezijongene nemiba ngemiba yezemfundo Sibona Iphepha Bag
Umsebenzi oSetyenziswayo weTrolley Pet Bag usebenzisa umoya ococekileyo ukujikeleza umoya kwingxowa yezilwanyana, kunye nee-ion ezimbi ukususa ivumba, ukubonelela izilwanyana zasekhaya kunye nabanini bezilwanyana ngamava angcono okuhamba. Amabhanti egxalaba angama-50 mm ububanzi, enza amagxa alayishwe ngokulinganayo kwaye kube lula ukuwaphatha. Umnyango wengxowa usebenzisa iqhaga lokhuselo elingatyibilikisiyo, elinokutshixa ucango ngesitshixo esinye ukukhusela izilwanyana zasekhaya ukuba zingaxhuma ngengozi. Ezantsi kwengxowa yenzelwe ngokukodwa iikholamu ukuqinisekisa ukuba ibhegi izinzile kwaye iyamelana nokujika xa ibekwe kumhlaba othe tyaba. Kuyilo lwevili, sisebenzisa amavili e-PU, anokunciphisa ngempumelelo ukothuka ukunciphisa ukungahambi kakuhle kwesilwanyana sasekhaya ngexesha lokutsala, kodwa sinokumelana nokukhuhlana kunye nokwenza ngcono ubomi benkonzo.
I-PD525 yoQeqesho lweNja yeKhola ekude
I-PD525 yoQeqesho lweNja yeKhola enezinto ezikude itotshi eyakhelweyo, imisebenzi emithathu yoqeqesho kunye namandla okudibanisa ukuya kwiikhola ezi-3 kude. Inokunceda ukujongana nokuziphatha okungafunekiyo kwezinja, njenge
l Ukutsala kwilothe
l Ifenitshala ehlafunwayo
l Ukuluma / ukuncipha
l Ukuleqa abantu ocingweni
l Ukubonisa ubundlongondlongo
I-PD525 yoQeqesho lweNja yeCollar ekude isebenzisa imisebenzi emithathu yesandi, ukungcangcazela kunye nokothuka okumileyo ukukhumbuza okanye ukulumkisa izinja ukuba ziyeke isimilo esibi. Phakathi kwemisebenzi, ukungcangcazela kunye nokothuka okumileyo kuneegiya ezili-100 zohlengahlengiso, ezinokunceda ngcono ukulawula isimilo senja.
I-PD525 yoQeqesho lweNja yeCollar ene-Remote isebenzisa i-collar strap eguqulweyo eyenziwe ngezinto ze-TPU, ezifanelekileyo izinja ezinobungakanani obahlukeneyo. Inokufikelela kwiintsuku ezingama-60 zokusebenzisa kunye nangaphezulu kweentsuku ezingama-200 zexesha elide lokulinda phantsi kwamandla apheleleyo. Owona mgama mde wokulawula kude unokufikelela kwiiyadi ezili-1090, kwaye unokusetyenziswa ngaphandle.
I-PD520S yoQeqesho lweNja yeCollar ekude ingasetyenziselwa ukususa isimilo esingafunekiyo sezinja ezinje ngokukhonkotha, ukutsiba, ukutsala kwilothe, ukumba nokunye okuninzi! Iinketho ezimbini zokubekwa kwindawo enye: uqeqesho lomntu ngamnye olwenziwe ngekhola enye kunye nesixhobo esinye esikude; ukukwazi ukudibanisa iikhola ezimbini ukuya kude ukulawula isimilo sezinja ezimbini.
I-PD520S yoQeqesho lweNja yeCollar eneemowudi zoqeqesho ezintathu: ukothuka okungashukumi, ukungcangcazela kunye nesandi. Umsebenzi ngamnye kula mathathu ulawulwa liqhosha elahlukileyo, kwaye kukho iindawo ezili-100 ezinamandla nezobuthathaka zohlengahlengiso kwimowudi yentshukumo kunye nemowudi yothuko emileyo. Emva kokutshaja iiyure ezimbini, irimothi ingasetyenziselwa ukuya kuthi ga kwiintsuku ezingama-180, isamkeli sinokusetyenziselwa ukuya kuthi ga kwiintsuku ezingama-60, ixesha lokuma lilonke ngaphezulu kweentsuku ezingama-200, kwaye umgama olawulo olukude awudluli kwiiyadi ezingama-545. Umtya wekhola uhlengahlengiswa, ulungele izinja ezincinci neziphakathi.
PD259B Anti Bark Inja ikhola
I-PD259B isebenzisa iindlela zoqeqesho ezimbini, imo yokothuka yombane kunye nemowudi yothusayo yombane. Kwimowudi yothusayo yombane, i-PD259B isebenzisa isikhumbuzi sesandi, isikhumbuzi sokungcangcazela kunye nesilumkiso sokukhwankqiswa ngombane, ngelixa imo engeyiyo eye-static isebenzisa ukungcangcazela kwesikhumbuzi songezwa sisikhumbuzo sesandi, esinokuseta iimeko zenja ezahlukeneyo. Ukongeza, i-PD259B Anti Bark Dog Collar ixhotyiswe ngescreen sokubonisa ukufezekisa ukusebenza kunye nokwenza ukusetyenziswa kwe-PD259B kube lula ngakumbi. Inqanaba lobuthathaka linokuhlengahlengiswa ngokwesandi sokukhonkotha kwenja. Ukusekwa kobuntununtunu kugqiba ukuba kulula kangakanani ukuqala i-PD259B Anti Bark Dog Collar ukuba isebenze.
PD258V Anti Bark Inja ikhola
I-PD258V ligunya eliphezulu elinokutsha kwakhona akukho khola yibharki enebhokisi eqinileyo. I-PD258V Anti Bark Inja ikhola sisixhobo sokulawula ukukhonkotha esizenzekelayo, esisebenzisa kuphela isilumkiso sokungcangcazela ukulawula indlela yokuziphatha kwenja. Kufanelekile ukuba izinxiba ezinkulu, eziphakathi kunye nezincinci.
Ubuntununtunu bunokuhlengahlengiswa, kwaye umsebenzisi angakhetha ubuntununtunu obufanelekileyo ngokomelela kwesandi sokukhonkotha kwenja. Kukho iigiya ezi-5 zokuhlengahlengisa, izixhobo ezingagqibekanga zingama-3 aphakathi. Xa ucinezela u "+" no "-" amaqhosha ohlengahlengiso, isandi siyakhala. Ukuphakama kobuntununtunu, kokukhona kulula ukwenza umsebenzi.
PD258S Akukho Bark Inja ikhola
I-PD258S yikhola ye-anti-bark etshajekayo yamandla asezantsi, enezikhumbuzi ezinesandi kunye nesilumkiso esimileyo, esifanelekileyo ukumisela imeko yokuziphatha kwezinja ezincinci naphakathi. Ubunzima bomnatha wemveliso yi-33g, engayenziyo ukuba inja izive isindwa xa iyinxibile. PD258S Akukho Bark Inja ikhola ihlawuliswe iiyure ezi-2, inokusetyenziselwa ukuya kuthi ga kwiintsuku ezingama-60 kwaye ixesha lokulinda lilithuba elingaphezulu kweentsuku ezili-180, lomelele kakhulu. I-PD258S inamanqanaba amahlanu ohlengahlengiso lobuntununtunu. Unokwenza uvakalelo lwenja ngokukhethekileyo ngokucinezela amaqhosha asekhohlo nasekunene ngokweemeko ezahlukeneyo zokukhonkotha kwenja. Ukongeza, inokujonga imeko yebhetri eseleyo, ekulungeleyo ukuba abantu bahlawulise isixhobo kwangexesha. I-PD258S inokufikelela kwinqanaba le-IP65 lokumelana namanzi, ukuze isetyenziswe ngokwesiqhelo nakwiintsuku zemvula okanye emanzini.
PD218 Akukho Bark Inja ikhola
PD218 Akukho Bark Inja ikhola lixhotyiswe ngescreen sokubonisa sedijithali, esiqonda ukubonwa kokusebenza, okwenza kube lula kwaye kube lula ngakumbi ukusebenzisa. Inemisebenzi emithathu: isikhumbuzi sesandi, isikhumbuzi sokungcangcazela kunye nesilumkiso sothuko ngombane. Ke umsebenzi we-PD218 Akukho Bark Inja ikhola inokusetyenziswa kwindibaniselwano emininzi, efanelekileyo izinja ezinobuntu obahlukeneyo kunye neentlobo zomzimba. Ibhetri eyakhelweyo egcwalisekayo inokusetyenziswa rhoqo kwizibuko lokutshaja i-USB, kwaye inokuhlawuliswa iiyure ezimbini kwaye inokufikelela ixesha lokulinda elide ukuya kwiintsuku ezingama-60.
Indlu yeNdlu yokungena manzi yangaphandle 424
Indlu yeNdlu engenanzi manzi engaphandle eyi-424 yenziwe ngezinto ezikhethiweyo ezikumgangatho ophezulu we-PP, eziqinileyo nezomeleleyo, ezingenasongo nezingenancasa. Xa isetyenziswa ngaphandle, ayikwazi ukwenza umthunzi kunye nokuvimba umoya, kodwa iyana kwaye iyaphefumla, ibonelela ngendawo ekhuselekileyo nenokonwaba yenja. Ukuthathela ingqalelo ukusetyenziswa kweentlobo ezahlukeneyo zomzimba wezinja, inezibini ezinobungakanani: 424-S kunye no-424-L. I-424-S yindlu yenja ekhethekileyo yezinja ezincinci (ezinje ngeShiba Inu, iCorgi, njl.njl.), Ngelixa i-424-L yenzelwe izinja ezinkulu (ezinje ngeAlaska, uMalusi waseJamani, njl.
Indlu yeNdlu yokungena manzi yangaphandle 403
Indlu yeNdlu engangenwa manzi yangaphandle engu-403 iza ngobukhulu obu-3 kwaye inokusetyenziselwa iikati kunye nezinja ezinobungakanani obahlukeneyo. Ukuthathela ingqalelo imikhwa yezinja ezincinci kunye neekati, kukho izinto ezimbini ezichaziweyo kwiimodeli ezincinci-isitayile somnyango kunye nesitayile esingenamnyango. Indlu yeNdlu engangenwa manzi engaphandle engu-403 isebenzisa uyilo lwesibhakabhaka ukwandisa ukujikeleza komoya, okulungeleyo ukukhupha nokususa ivumba, kunye nokugcina umoya kwindlu yenja utsha. Uyilo lweeves ezingunxantathu olugudileyo lunokuthintela ngokufanelekileyo amanzi emvula ukuba angene endlwini kwaye aququzelele ukucocwa kwendlu yenja. Ucango luxhotyiswe ngesitshixo sokhuseleko, esinokuvulwa kumacala omabini kwaye kulula ukuyisebenzisa. Iindawo zokungenisa umoya ziyilelwe kwiindawo ezininzi endlwini ukomeleza ukungena komoya kunye nokukhupha ngaphakathi endlwini ukususa ivumba nokukhusela ivumba. Isiseko sinokususwa ngokulula ukucoca ngokulula. Kwaye indlu yonke ihlanganisiwe ukunciphisa umthamo wokupakisha kunye nokunciphisa ukuthuthwa kwempahla
Xa uphume nezilwanyana zasekhaya, ukhetho lwenqwelomoya lubaluleke kakhulu. Kule mihla, kukho zonke iintlobo zeemveliso zokuhamba kwezilwanyana kwintengiso ezinje ngeobhaka, istraler, isiphatho, isipaji, isilingi nokunye. Kodwa inja elungileyo okanye imveliso yekati yokuhamba ayifanele kuphela ukusombulula ingxaki yokuthuthuzelwa kwezilwanyana zasekhaya, kodwa isombulule ukunceda kwabanini bezilwanyana zasekhaya.